Qalabka yar-yar & soo saarida mugga-weyn ee wax soo saarka Apicmo cdmo Warshadaha
Adeegyada Our > Waxyaabaha yar yar iyo wax soo saarka ballaadhan
Tobankii sano ee la soo dhaafey, APICMO waxay bixisay adeegyo qalabeed iyo adeegyo wax soo saarka ah. Heerkayaga adeegu wuxuu ka koobnaan karaa dufcadaha yaryar ee milligram ilaa tan oo ah adeegyo wax soo saar badan oo waaweyn.
Inta badan macaamiishayadu waxay ku yaalaan waqooyiga Ameerika, Yurub, Aisa, oo ay ku jiraan Pfizer, lilly, roche, GSK, MSD, bayer iyo shirkad caan ah.
Dhammaan adeegyadeena gaarka ah iyo adeegga wax soo saarka waxaa lagu fuliyaa shuruudaha sirta adag. Kooxdayada mashruucan ee isku dhafan waxaa taageera koox khibrad sare leh oo koox gaar ah u leh kiimikooyinka kor u qaadaya. la tigoodu kala duwan heerkulka ka -100˚C ilaa 300˚C ah, iyo qolfo leh laga bilaabo 5L in 5000L shaqaynta, qiimaha loo gacangeliyey macaamiisha by hufan Avv in-guriga ah intermediates mashruuc oo muhiim ah (ilaa tiro ton ton) oo firfircoon maaddooyinka daawooyinka. Wax soosaarka waxaa lagu sameeyaa xarumaha wax-soosaar-wadaagga oo dhan.
Waxaan u xaddidnaa qalabka wax soo saarka ee kiimikada wax soosaaraya si aad uhesho gaarsiinta mashruuca gaarka ah leh xawaaraha iyo kharashka ugu fiican marka la gaaro heerarka ugu sarreeya ee nabadgelyada habsami u socodka iyo fulinta sharciga. Nidaamka wax soo saarka ee la fududeeyay wuxuu u oggolaanayaa qiyaasaha dufanka jilicsan iyo tayada wax soo saarka. Dhammaan nidaamyada waxaa loogu talagalay inay ka soo baxaan heerarka jaangooyooyinka adag